Lawrence Maxwell, Lehilahy Shiliana Niatrika Ny Herisetran’ny Polisy Meksikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2015 2:46 GMT
Pikantsarin'ny habaka Radio Ambulante mampiseho ny tafatafa niarahana tamin'i Lawrence Maxwell, Shiliana mpianatra notànana nandritra ny fihetsiketsehana tao Ayotzinapa.
Nanatevin-daharana ny filaharana tamin'ny diabe 20 Novambra tao amin'ny kianja afovoan-tanànan'i Zócalo i Lawrence Maxwell, lehilahy Shiliana monina ao Mexico City mba haneho ny firaisankinany amin'ireo mpianatra Ayotzinapa 43 nanjavona. Tao anatin'ny minitra vitsy, nosamborina niaraka tamin'ireo mpandray anjara 10 hafa izy.
Saingy tsy tahaka ny any Shily tanindrazany, raha ao anatin'ny toe-javatra amin'izao, ora vitsy no hitazonan'ny polisy ireo voatàna alohan'ny hamotsorana azy amin'ny ankapobeny, dia nahazo fanaraha-maso akaiky sy manokana mifandraika amin'ny herisetra tsy tafala amin'ny rafi-pitsarana Meksikana i Lawrence.
Amin'ity antsafa nifanaovana tamin'ny Radio Ambulante ity- notantarain'ny rahalahiny Dennis Maxwell- awrrence, manam-pahaizana momba ny fiarahamonina sady mpianatra haka mari-pahaizana dokotorà ao amin'ny Oniversitem-Pirenena Miahy Tenan'i Meksika (UNAM) indray ny zava-niainany.
Natombok'i Dennis Maxwell tao amin'ny fandraisam-peo ny fanazavana fa ny rahalahiny -tahaka ireo Meksikana an-hetsiny- dia nanao hetsi-panoherana ny governemanta ho setrin'ny fakàna an-keriny faobe ireo mpianatra 43 sy ny herisetra mianjady amin'izy ireo. Toy izao ny tantaran'ny nisamborana azy:
Ny alin'ny fisamborana azy, tonga tao amin'ny foiben'ny renivohitra Meksikana, bolonga-trano vitsivitsy miala avy eo Zocalo i Lawrence hijerena mialoha ny diabe. Tao izy no tafahoana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana an-hetsiny. Teo an-dalana hanidy ny bisikiletany tamin'ny toerana andry iray izy no nanatona azy tampoka ny andiam-polisy manampahefana.
Mamariparitra ny fomba nitrangan'ny fisambroana i Lawrence Maxwell :
Ka hoy aho: “Eny, ny zavatra tsara tokony hatao eto dia miezaka miala ao anatin'ny fitoniana araka izay azo atao ..miezaka mba tsy hisy zavatra hitranga ,” ao? Miezaka ny mamindra, mamindra in-3. in-4, in-5, im-10 angamba aho, no toa naheno manamboninahitra polisy iray, tahaka ny iray izay miandraikitra ny bemidina, milaza hoe: “Sambory koa iny.”
Mikapoka sy mandrahona azy, nentin'ireo polisy niala teo izy. Nosaroman'izy ireo tamin'ny palitaony ny tavany ary notaritin'izy ireo nanavatsava ny kianja izy.
Avy eo nilaza antsipirahany ireo fihoara-pefy am-bava niaretany tamin'ny polisy i Lawrence::
Hoy izy ireo tamiko, “Goaka ato ny vodin'ialahy androany, anjaran'ialahy izao, ho hitan'ialahy tsara izany”, na, “hiafara any am-ponja ialahy,” na tsy fantatro, tahaka ny hoe “Mpampihorohoro” na “Jiolahy”
Nanohy ny tantarany i Dennis, momba ny famotopotorana azy indray :
Ny alina sy ny ampitso, tsy nitsahatra ny natao famotorana ny rahalahiko sy ireo 10 hafa notànana. Nandona mafy an'i Lawrence izany, amin'ny lafiny ilany satria tsy Meksikana izy. Araka ny nolazain'ireo manamboninahitra namotopototra azy, amin'ny maha-vahiny azy dia tsy manan-jo ny hitsabaka amin'ny politika Meksikana ny rahalahiko.
“Tonga eto ianao hanakorontana, hanapa-javatra, mpampihorohoro ianao,” hoy izy ireo. “Fa dia inona no nandehananao sy nidiranao tamin'ity diabe ity?”
Taty aoriana tao amin'ny fandraisam-peo, dia novelarina kokoa ny antsipirihan'ny fampitahorana nataon'ny polisy. Araka an'i Dennis, napetraka tao amin'ny seza aoriana ireo notazonina, ary tsy 11 intsony ny isan-dry zareo fa 8, lehilahy daholo. Nesorina tao amin'ny vondrona ireo vehivavy telo. Mpiasa enina, mitam-piadiana avokoa, no miambina azy ireo, ary ny iray no tena masiaka indrindra. Rehefa nentina nivoaka an'i Mexico City ry zareo dia hoy ity mpiasa ity :
Lawrence Maxwell: “Andeha izahay hitondra azy ireo any Ayotzinapa ary any izahay no hanapatapaka azy ireo sy handoro azy ireo,” nampiany, “Saingy tsara kokoa raha ariantsika ivelan'ny fiara ireo dia tifirina mba tsy ho tafiditra gidragidra isika fa tsy fantatrao ihany fa…”
Dennis Maxwell: “Tsy misy zon'olombelona any,” hoy ireo taminy. “Any izahay afa-manao izay tianay atao aminareo.”
Fotoana tokana ahafahana mihaino ny zava-mianjady amin'ireo olona maro nosamborina eo ampelatanan'ny rafi-pitsarana ao Meksika ny antsafa. Ny fandraisam-peo dia azo henoina manontolo ato.